Wasiirka Madaxtooyada oo beeniyay Heshiiska Somaliya iyo Hadal dhagaraysan oo Mucaaridku dusha ka saareen Wasiirkii hore ee Arimaha Dibada. |
Wasiirka Madaxtooyada oo beeniyay Heshiiska Somaliya iyo Hadal dhagaraysan oo Mucaaridku dusha ka saareen Wasiirkii hore ee Arimaha Dibada.
Baryahan danbe waxa la isla dhex marayay warqad la sheegay in laga helay sirdoonka Sucuudiga oo ay baahisay shabakada faafisa siraha caalamka ee Wikileaks.Taas oo lagu sheegay in Somaliland heshiis lagashay Somaliya iyo Puntland si loo sameeyo dawlad fadaraal ah.
Xukuumada Somaliland arintaasi kama jawaabin,hase yeeshee xisbiyada mucaaradka iyo madasha ayaa saaka arintaasi si wayn uga hadlay.Mucaaridku kama ay hadlin warqada iyo waxa ku qoran oo kaliya hase yeeshee waxa kale oo ay sheegeen in xukuumadu heshiiska ay gashay cida saxeexdayna ay tahay wasiirkii hore ee Arimaha dibada JSL Maxamed Cabdulahi Cumar.
Ma jirto meel xukuumadu arintaa ku sheegtay sidoo kale mucaaridkuna ma ay sheegin cid xukuumada ka tirsan oo arintaas ay kasoo xigteen ,kaliya waxay sheegeen in warbaahinta qaar ay qortay.
Hadaba wasiirka madaxtooyada Somaliland mudane Xirsi Cali Xasan oo warbaahinta qaar ay sheegeen in uu isagu Wasiirkii hore eedeeyay ayaa arintaasi mar dhawayd ka hadlay .
Hadalka wasiirka oo qoraal ahina wuxu u dhignaa sidan:
Waxaan Beeninayaa Warka Warbaahinta qaarkood ku sheegeen in ay kasoo xigeen Mareegta caanka ku ah faafinta siraha dawladaha ee Wikileaks kasoo sheegaya in Somaliland iyo Somalia heshiis midow wada galeen isla markaana aan eeda arinkaas dusha u saaray Wasiirkii hore ee Arrimaha Dibeda, waxaan cadaynayaa in warkaas aanu sal iyo raad toona lahayn aananan ogayna!
“Qaranimada Somaliland waa mid ku dhisan rabitaan umadeed oo aan marnaba ka noqod iyo gorgortan toona lahayn!”
Ugu horayn dhamaan umada Muslimiinta ah waxaan leeyahay Ramadaan Kariim, Allaha inaga dhigo kuwa ku guulaysta Naxariista iyo dembi dhaafka Alle isla markaana naarta laga xoreeyo.Intaas kadib, waxaan qalinka u qaatay inaan kalmado kooban kaga falceliyo qoraal aan macno iyo miisaan badan lahayn oo lagu baahiyey warbaahinta qaarkood kaasoo sheegaya in Mareegta caanka ku faafinta siraha dawladaha ee Wikileaks ay baahisay qoraal lagu sheegay in ay kasoo jabsatay keydka siraha ee Wasaaradaha arrimaha dibeda ee Sucuudiga nuxurkeeduna yahay heshiis sida ay ku sheegeen Somaliland iyo Somalia ku saxeexdeen inay dib u midoobaan!! Waxaase kasii daran in ay ku doodeen in aan Wasiirkii hore ee Arrimaha dibeda Dr Mohamed Abdilahi Omer aan dusha u saaray!